२०७७/१२/०९ सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल ! – News Nepali Dainik
२०७७/१२/०९ सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल !
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र ०९, २०७७ समय: ६:११:२१
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) अगाडि सारेका व्यक्तीद्वारा सम्पादित कार्यहरु बिफल हुनेछन । कठिनाइजनक यात्राको योग रहेको छ । आटेका कार्यमा कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ । मित्रजनसँगको अधिक निकटताको कारण भाग्योदयमा बाधा उत्पन्न हुनेछ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ । गरिरहेको काममा सामान्य झ’न्ज’ट स’ह’नु पर्ला ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) निरन्तर भइरहेका कार्यबाट बिषेस लाभ लिन सकिनेछ । अर्काको खुसिको लागी अनावश्यक पश्रिम ख’र्ची’नु’प’र्नेछ । सोचेको भन्दा बढिमात्रामा ख’र्च हुनाले मानसिक चि’न्ता’ले स’ता’उन सक्छ । सामान्य चो’ट’प’ट’क’को सामना गर्नु पर्न सक्छ । कार्य सम्पादनमा अरुको द’बा’ब’को अनुभब हुन सक्नेछ ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) खोज तथा अनुसन्धानमुलक क्षेत्रमा बौदिकताका् खर्च हुनेछ । बाकपटुताको कारण कुरा काट्नेहरु चुप भइ प्रशंसा गर्न थाल्नेछन । पठन पाठन सफल रहनाले बौदिकताको सर्वत्र कदर हुनेछ । प्रतिस्पर्दीहरु कमजोर रहनेछन । आम्दानि क्षेत्र भने मध्यम रहेको छ । ज’टि’ल कार्यहरु सम्पादन गर्न उत्तम समय रहेकोछ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) मनमा चन्चलता बढ्नाले निर्णय लिने क्षमतामा ह्राँस आउनेछन । सफल कार्यसम्पादनको लागी कडा परिश्रम गर्नु परे तापनि कार्य सफलताले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा धेरै समय र परीश्रम ख’र्चि\_नु पर्नेछ । भौतिक श्रोतसाधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) प्रतिश्पर्दि हरु कमजोर रहनेछन । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश हुनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य ख’ट’प’ट आई पर्ला । तपाईको कार्यले अन्य ब्यक्ति हरुलाई मनग्य लाभ दिलाउने छ । मनमा सामान्य चि’न्ता’ले बास गर्नेछ । स्वास्थमा देखा परेको गढबढीले कार्य सम्पादनमा सामान्य झ’न्झ’ट उत्पन्न गराउला ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) सामान्य क्षती ब्यर्होनु पर्ला । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशमा कमि आउनेछ । सन्तान सम्बन्धि स’म’स्या’ले सताउने छ । मेहेनत अनुरुपको फल प्राप्ति नहुनाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित हुने छ ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याको कारण मनमा सामान्य चि’न्ता’ले स’ता’उन सक्छ । कार्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । सामान्य आम्दानि हुने योग रहेको छ । कार्य सम्पादनमा बिभिन्न स’म’स्या’का कारण ढिलाई रहन सक्छ । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । कार्य सम्पादनमा भएका सामाय त्रुटिले अ’प’ज’सको सामना गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।
Last Updated on: March 22nd, 2021 at 6:11 am